Ukuphehlelwa kwencwadi enembali yonoqhakancu - Wordfest South Africa
Ukuphehlelwa kwencwadi enembali yonoqhakancu
Ubomi bephupha nohambo luka Mary Agard Pockock, lusingise E Angola ngonyaka ka 1925 ephanda ngobomi babuthwa. Ititshalakazi endala edla umhlala phantsi inike ingxelo ngobume bobuthwa.
Iphupha longasekhoyo u Tony Dold lwencwadi equlathe ubomi babathwa nokusebenzela phandle (Bushmen, Botany and Baking Bread) unkosikazi Jean Kelly usinike ingxelo. U Tony uxelwa kanintsi kulencwadi njengo mhlalutyi ophezulu none galelo elikhulu ekubeni ibe lencwadi iyaphehlelelwa ngokuse sikweni namhlanje.
Ethetha kumsitho wababhali ngo 2019. U Kelly uthi umceli mngeni kubo nongasekhoyo Tony Dold, yayikukudibanisa ukwenza iphupha labo lencwadi lizaliseke. Ukuhambela kwalamkhosikazi kwizizwe kuquka Angola, and Zambezi yabanoku tshintsheka ngenxa yokuzimela. Babe phahlwe ngababumbi bodwengwe kuquka inqanawe emashumi asibhozo ehambela e Zambezi.
Kwabakhona ukubhideka kwababhali nabatoliki belwimi kunye nabathathi foto. Kule ncwadi kukhona okwalibalekayo. Uthi unkosikazi Jean, kwakusazeka okokuba Bleek, uhambe u Mzantsi Afrika wonke ezama, zama ukubhala ngembali ya bathwa namasiko abo, ulwimi lwabo kunye nezithethe zabathwa. Dold kunye nonkosikazi Jean, abakwazanga ukufumana isibini esabayinxalenye kulendlela.
Itsha ntliziyo elalingumsebenzi waphandle elalifanelwe kukuwongwa ngenxa yomsebenzi negalelo lakhe kwezemveli naku phuhliso lwencwadi Pocock’s diaries. Labhala lashicilela imizuzu londlala ngemo yezilwanyana, indalo, ukwenza lula kumfundi okokuba abone eve ngendlela awayiphilayo. Babebizana njengabahlobo abahlukaniyo. lencwadi iqulathe imifanekiso yodonga, kunye nefoto. inge mbali yencubeko nendalo.
“Njengokuba ndibhala nje kuhleli isele alingelikhulu kuyaphi entendeni yesandla sam – nalo litsiba lihlala egxalabeni lam. Iinyawo zalo zinanamaqhunyana, kwaye linomgca omhlophe osuka empumlweni wehle emacaleni linamehlo amnyama nagolide. Ndicinga ukuba lesele elihlala emthini, kodwa ngoku lihlala engceni. Ngoku lisukile egxalabeni lam lithe ngcu ecaleni lesikhitshane. Ayinto entle nexabisekileyo. Utshilo unkosikazi Jean Kelly.
Elibali libhalwe ngelwimi ezahlukeneyo ezifana ne English. Ngoko nceda uzikhethele ngokucofa olwakho ulwimi.
Tags: bushmen botany and baking bread isixhosa jean kelly
Previous Courtenay-Latimer: curation, crusades and the coelacanth
Next Imfundo isisekelo esibalulekileyo sokuqala emntwaneni